14 Dec, 2018 - 00:12	 2018-12-13T06:55:28+00:00 2018-12-14T00:01:29+00:00 0 Views
VAIFONA pa0778 718 450 ngavachirega havo. Ndakamuwana wangu wandaida uye ndakatoroorwa.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 20 kusvika 35 ane rudo. Anenge andida ngaandibate pa0778 406 174, ndatenda.
Makadini? Ndiri mukomana ane makore 23 uye ndiri kutsvaga musikana anondida ane makore 21 zvichidzika asiri pamushonga. Ndinogara muHarare, anondibata pa0782 658 420.
Muverengewo tsamba yangu. Ndiri musikana ane makore 23 ekuberekwa. ndinotsvagawo murume, andida ngaandibate pa0775 841 144.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 51, ndinotsvagawo murume anonamata anoda zvekuroora, asina mudzimai, anoshandawo basa riri nani kana ane bhizimusi. Nhare yangu 0771 568 982.
Makadini veTishamwaridzane? Ini ndiri mukomana ane makore 26 ndichigara muGweru uye ndinoshanda. Ndotsvagawo musikana kana ane mwana mumwe zvake. Fonai apa 0778 886 512.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 23 ndotsvagawo shamwarisikana yakavimbika uye anozvibata zvine utsanana achigara maMutare. Runhare rwangu 0782 090 973.
Ndiri mukadzi ane makore 36 nemwana 1, HIV+ uye ndinotsvagawo munhurume anoda zvekuroora ane rudo rwechokwadi ane makore 38 kusvika 45. Anondibata pa0776 208 363.
Makadii? Ndiri murume ane makore 32 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadii akanaka ane makore 18 – 32. Chero anoshanda muHurumende anoda ngandibate pa0777 874 583.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 21, ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore 18. Ndinogara kuGweru, andida anondibata pa0717 052 756 asi kwete matsotsi.
Makadii? Ndiri murume ane makore 37 ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ari pamushonga asingataridzike. Ndibatei pa0772 940 346.
Makadii veKwayedza? Ndine makore 28 ndotsvagawo mukadzi kwete matsotsi kana vanoda kutamba. Ndogara kumusha, ane mwana mumwe kana asina anoda kutaura neni ndibate pa0713 937 040.
Makadini henyu? Ndiri mukadzi ane makore 31 uye ndinotsvagawo murume anoda zvemba. Ngaave ane makore 38 kusvika 40 asiri pamushonga. Nhare yangu 0775 576 643.
Ndiri murume ane makore 45, ndiri kutsvagawo mukadzi ane makore 36 zvichidzika. Ndinoda ari pachokwadi akasimba zvinoratidza chimiro chiri nani. Ngaave ari pamushonga asingaratidzike, ndine mwana 1 uye ndoda anoshanda asina usimbe. Ndiri fisher man kuKariba. Ndoda akanaka, asina hutsinye nemwana wangu. Anondida anondibata pa071 7 680 252.
Makaita henyu veKwayedza nekushambadza yangu tsamba. Kune vese vaifona pa0776 302 976 chiregai henyu nekuti ndakamuwana wangu wandaida.
Ndiri murume ane makore 35, ndotsvagawo musikana kana mukadzi ane makore 22 zvichienda mberi uye anonamata. Nhare yangu 0778 256 661.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 35 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo murume, andifarira ngaandifonere pa0776 779 078 asi matsotsi kwete.
Ndiri murume ane makore 42 nevana vatatu, ndoda mukadzi ari pachokwadi ane vana vake 2 kana 1. Ane makore kubva 30 kusvika 38 anoda anondibata pa0785 196 847.
Ndiri kutsvagawo mudzimai ane makore 35 zvichidzika anoda kuroorwa ane vana vake uye anoshanda. Ndine vana 2, andifarira ngaafone pa0774 652 166.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 27, HIV negative uye ndodawo musikana ane makore ari pakati pe18 kusvika 23. Ndogara kuHarare, nhare yangu 0785 146 078.
Ndinotsvagavo mukadzi wokuroora asiri pamushonga ane makore 26 kusvika 36 ane chido nekuvaka musha. Ini ndinogara kuChipinge, ngaave anofarira zvokurima nokuti ndiro basa randiri kuita. Kana pane anoda ngaandibate pa0779 173 315. Ndini Muchenjero.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 39, ndotsvagawo mukadzi ane rudo asina chirwere, ane chero api makore chero asingabereki ndomuda. Ini handishande parizvino. Andifarira ndibate pa0777 088 728.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 45 nevana vaviri, ndinotsvagawo mukadzi ari pachokwadi ane makore 35 zvichidzika. Ngaave aine mwana mumwe kana vaviri kana asina uye asina chirwere. Ndinoda anogara muHarare kana kuChitungwiza. Zvimwe tinozotaura, anondida ndinobatika pa0775 446 249.
Kwayedza mwenje werudadiso ndinotenda nechino chirongwa. Ndiri murume ane makore 48. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi. Nhare yangu 0777 061 531.
Ndiri mukomana ane makore 31, ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi ane makore 28 zvichidzika. Nhare yangu 0771 292 615.
Ini ndiri mukadzi ane makore 40. Ndotsvagawo murume wekuroorana naye ari pachokwadi. Ndodawo anotya Mwari asiri muwanano parizvino ane vana, ini ndine mwana 1. Ndinobatika pa0771 523 121.
Makadii? Ndinodawo musikana wekuroora ane makore 20 – 25. Ini ndine makore 27, nhare dzangu 0784 171 278.
Ndiri murume ane makore 32 uye ndiri HIV negative. Ndotsvaga mukadzi ari kuda zvekuroorwa asina murume uye ari pachokwadi ane makore 25 – 34. Ngaatumire tsamba nhare kana kufona pa0774 953 164 totaura. Vanoda zvekutamba kwete.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 20 kusvika 30 ane mwana 1 kana asina. Andifarira nhare yangu 0785 518 759.
Ndiri murume ane makore 38 ndoda musikana wekufambidzana naye ane makore 25 – 33. Nhare yangu 0776 016 665.
Makadii henyu? Ndine makore 32, ndiri kutsvakawo mukadzi kana musikana ane makore 32 zvichidzika. Ndoshanda muHarare, ndimo mandinogara. Nhamba dzangu 0783 678 375.
Ndiri murume ane makore 41 ndotsvagawo mukadzi akanaka anoda kuroorwa ane makore 26 – 35. Zvakawanda tozotaura, vandifarira ngavafone pa0783 172 378.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 24, ndinotsvaga murume ane makore 27 kusvika 36 asiri pamushonga uye asina mukadzi. Ndinobatika pa0784 334 206.
Makadii? Ndiri murume ane makore 39 ndotsvaga mukadzi wekuroora akavimbika asina hutsvina. Nhamba yangu 0782 668 964.
Makadini? Ndiri mukomana wemakore 23 ndinodawo musikana wemakore 21 zvichidzika ari pakurevesa. Ngaave asina mwana, anogara Harare ngaandibate pa0782 058 592.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 25 ndoda murume ane makore 26 – 30. Handidi anoenda kumasowe neari pamushonga. Nhamba dzangu 0782 605 790.
Makadi veKwayedza? Ndiri kutsvagawo musikana ane makore 19 zvichidzika. Ini ndine makore 20, ndinoda wekushamwaridza naye. Anoda anondibata pa0779 612 786.
Munofara here? Ini ndiri murume ane makore 40, ndinotsvagawo mudzimai anoda zvekuva mai vemba ane makore 25 kusvika 37. Ndinoda ari business minded akadzidzawo zvishoma ini ndinoshanda asi ndine zvimwewo zvandinoita. Ngaave ari pamushonga but akasimbawo seni, matsotsi kwete. Kune vari pachokwadi ndibatei pa0718 873 509.
Ini ndine makore 36, ndodawo musikana anoda zvekuroorwa pachokwadi asina HIV. Nhare yangu 0785 841 387.
Makadii? Ndinodawo musikana wokuroora asina chirwere ari muchokwadi ane makore 18 – 20. Nhamba yangu 0784 434 346.
Makadii? Ndotenda vese vaindifonera pa0776 166 475 chiregai henyu ndakamuwana wangu wandaida.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 33 nemwana mumwe. Ndiri kutsvaga murume asingapute nekunwa anoda kuroora kwete kubika mapoto. Ngaave anoda kuongororwa ropa. Ndinoshanda, nhare yangu 0714 384 502.